SAWIRRO: Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Galmudug Mudane Cali ciid oo kulan laqaatay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 11th February 2020 0125
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Gobolleedka Galmudug Ali Dahir Eid ayaa magaalada Dhuuomareeb kulan kula qaatay Agaasimayaasha Guud ee Wasarradaha Dowlad Gobolleedka Galmudug.
Kulanka ayaa looga wada hadlay dardar galinta howlaha Wasaaradaha iyo in Agaasimeyaasha ay isbuuc walba yeeshan kulan gaar ah oo la isaga waraysanayo hormarada la sameyay iyo caqabadaha jira.
Sido kale waxaa Madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo agasimeyaasha ayaa isla qaatay in galmudug ay qaadato tubaha Qaranka ee 4ta ah kuna shaqayso Qorshaha hormarinta Qaranka iyo tubaha qaranka oo wada jira
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Gobolleedka Galmudug Ali Dahir Eid ayaa uga mahad celiyay Agaaimayaaha shaqooyinkii ay soo qabteen, waxa uuna faray in ay sii dar dargaliyaan shaqooyinka Wasaaradaha oo habsaan ku yimid bilihii lasoo dhaafay.
Madaxda sare ee maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuusomareeb kawada kulamo kala duwan oo lagu dar dar galinayo howlaha horyaala maamulka Galmudug ee dhawaan hogaankeeda cusub lagu doortay Dhuusomareeb.
TOP NEWS: Maxkamad ku taala Mareykanka oo xabsi 12 sano ah ku Riday Nin Soomaali ah oo lagu eedeyay in uu dilay Gabadh uu dhalay oo 8 bilood jirta
Dab ka Kacay Qeybo ka mid ah Mareykanka Oo Ruux 3: Somali ah ku Dhimatay